Tageerada xisbiyada siyaasada iyo sannadkan cusub - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tageerada xisbiyada siyaasada iyo sannadkan cusub
La daabacay torsdag 22 januari 2015 kl 17.00
Ra’yi ururintii ugu horaysay ee la sameeyay sannadkan ee la xidhiidha tageerada shacabka reer Sweden u hayaan xisbiyada kala duwan ee siyaasada oo ay si wada jir ah u sameeyeen TV4 iyo Novus ayaa daaha ka fayday in ay yaraatay tirada u dhaxaysa labada dhinac
Xisbiyada dawlada iyo xisbiga Bidixda, Vänsterpartiet ayaa haysta taageero dhan boqolkiiba 41,7 tageerada codbiyayaasha. Halka ay xisbiyada xulufada garabka midig ay haystaan 38,7 boqolkiiba taageerada codbiyayaasha.
Xisbiga Folkpartiet ayaa ah, xisbiga tirada ugu yar haysta xisbiyada xulufada garabka midig, isaga oo haysta 4,1 tageerada dadka codbiyayaasha ah ee laga qaaday ra’yi ururintan.
Xisbiga Svarigedemokraterna ayaa isagu dhigay rikoodh cusub isaga oo haysta 16,5 boqolkiiba taageerada codbiyayaasha. Halka xisbiga Feministiska Initiativ uu isagu haysto 2,2 boqolkiiba taageerada codbiyayaasha.
Ra’yi ururinta oo lagu qaaday khadka telefoonka ayaa la qaaday intii u dhaxaysay 22 diisambar ee sannadkii 2014 ilaa 18-kii janaayo ee sannadkan 2015. Waxaana ka qayb galay 2007 qof.